कलाकार हरिबहादुर थापा,(बासु श्रेष्ठ -खसखस डट कम)
(फोटो साभार:नेपालमदर डट कम)
हालै रँगमँच सम्राट उपाधिले न्युयोर्कमा विभुषित हुनुभयो । कस्तो अनुभव गर्नभयो?
पहिलो पटक न्युयोर्कको अफ ब्रोडवे थिएटरमा 'जोडियोस् भत्किएका मनहरु' नाटक मँचन गर्नुभयो । कस्तो अनुभव गर्नुभयो?
नेपाली नाटक विदेशमा मँचन गर्दाका समस्या के हुन् र तिनका समाधान के हुन सक्छन्?
नेपालमा विदेशी नाटक नेपालीमा उल्था गरेर मँचन भई रहेको छ । तपाई भने नेपाली नाटकहरु अँग्रेजीकरण गर्ने भन्नुहुन्छ । यो विरोधाभासको स्थितिलाई के भन्नुहुन्छ?
तपाई नाटक त शायद लेख्नुहुन्न । तर तपाईले अभिनय गर्ने नाटकमा कस्तो आधारभूत तत्व खोज्नुहुन्छ?
नेपाली नाटक लेखनको अवस्था कस्तो छ जस्तो लाग्छ? लगायत बिभिन्न रोचक प्रसँगहरुमा भएका कुराकानी प्रस्तुत छ |